Uzbhekistan - ALinks
Ngaba ujonge iindlela ezintsha zokwandisa ishishini lakho? Iinkampani zijonge ngakumbi ukukhula kwemisebenzi yazo kumazwe aphesheya kwezi ntsuku. Ngelixa i-Uzbekistan isenokungabi lilizwe lokuqala elivela engqondweni xa ucinga ngokudityaniswa kwehlabathi, ilizwe liye
Disemba 13, 2021 UAntika Kumari imali, Uzbhekistan
I-Uzbekistan lilizwe elalisakuba yiSoviet kuMbindi weAsia. IiMosque, ii-mausoleums, kunye nezinye iisayithi ezinxulunyaniswa neSilk Road, indlela yezorhwebo eyimbali edibanisa iChina neMeditera, zaziwa kakuhle. IRegistan, iplaza elihonjiswe ziinkolo ezintle ezintathu ezigqunywe ngemibala
Ufumana njani umsebenzi eTashkent?
Oktobha 2, 2021 UAntika Kumari imisebenzi, Uzbhekistan
I-Tashkent, ekwabizwa ngokuba yi Chach (Persian), yidolophu enkulu yase-Uzbekistan kunye nesona sixeko sikhulu, kunye nesona sixeko sinabantu abaninzi kwi-Asia esembindini. Ime kumantla mpuma e-Uzbekistan, kufutshane nomda weKazakhstan. Izixhobo ezidweliswe ngezantsi zinokunceda
Julayi 11, 2021 UMaitri Jha Uzbhekistan, ivisa
Ngokwe-Index yokuGcina iPasipoti yeHlabathi, ipasipoti yase-Uzbekistani ikwindawo ye-80th. Ivumela uhambo lwe-visa-free kumazwe angama-60. Abaphethe ipasipoti baseUzbekistani banokuya eRashiya, eTurkey, eUkraine naseIndonesia ngaphandle kweVisa. IiVisa ziyafuneka ukuze abantu baseUzbekistani batyelele
Xiaomi Redmi Qaphela i-8 Pro iyafumaneka e-Uzbekistan-uphononongo, iinkcukacha kunye nexabiso
Februwari 27, 2021 demi izinto ukuthenga, Uzbhekistan
Ndikhangele i-Xiaomi Redmi Qaphela i-8 pro ye-smartphone ekhoyo ukuba ithengwe e-Uzbekistan kwaye ndafumanisa ukuba ezi zimbini zinokukhethwa ngexabiso elifanelekileyo. Banombala ofanayo, ukurhatya kweorenji, kodwa beza ne